Fitantanana ny HCC :: Tsara toerana ho filoha ireo mpitsara zokiolona ampy traikefa • AoRaha
Fitantanana ny HCC Tsara toerana ho filoha ireo mpitsara zokiolona ampy traikefa
Hanao fianianana, etsy amin’ny lapan’Ambohidahy ireo mpikambana sivy vaovao handray toerana eo anivon’ ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC), rahampitso. Hiroso amin’ny fifidianana an’izay ho filohan’ity andrimpanjakana ity izy ireo, aorian’izay. Loharanom-baovao iray no nahalalana fa tsara toerana handray ny fitantanana ny HCC ireo mpitsara zokiolona sy manana grady ambony. « Tombony amin’ ny fahafahana hofidiana eo amin’ io toerana io ny fananana traikefa sy ny toerana efa nisy azy », hoy ny loharanom- baovao.
Isan’ireo voatonona matetika ny anaran’ny minisitry ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana teo aloha, Rakotoarisoa Florent. Sokajiana amin’ireo olona akaikin’ny Filohan’ny Repoblika izy satria efa mpanolotsaina avo tao amin’io andrimpanjakana etsy Ambohidahy io.
Tsy misy fe-potoana raikitra voafaritry ny lalàna ny fanatontosana ny fifidianana ny filohan’ny HCC. Miankina amin’ireo mpikambana ihany ny famaritana ny daty hanatanterahana an’izany. Toy izany koa ny fanatontosana ny famindram-pahefana eo amin’ ny filoha vaovao sy ny filoha teo aloha. « Tsy voatery hatao amin’ny fomba ofisialy kosa anefa io », araka ny fanampim-panazavana avy amin’ ny loharanom-baovao.
Fanefitry ny covid-19 – Hanafaingana ny fanafarana vaksiny maromaro ny Fanjakana
Famoronana tanan-dehibe :: Haorina mialoha ny Lalaon’ny Nosy ny Tanamasoandro
Fanajana fepetra ara-pahasalamana :: Milaza ny hanao be fiavy ny prefektioran’Antananarivo sy Toamasina